Indlela yokwenza i-gradient yombala | Abadali be-Intanethi
Ukuba ufuna ukufunda indlela yokwenza i-gradient yombala kwi-illustrator, hlala, kule post siza kuchaza indlela yokwenza ngendlela elula.
Njengoko usazi, xa kufikwa ekuhlelweni komfanekiso, kukho amathuba amaninzi okufikelela kwiziphumo zoqobo ezitsala umdla woluntu. enye ye iziphumo, ezinokukunika eso siphumo simenyezelayo sithethe ngaso, sisixhobo sokuthamba.
Isithambiso si umanyano lwemibala eyahlukeneyo enemithunzi yombala efanayo. Yenye yeendlela ezilungileyo zokubeka uluhlu oluhlukeneyo lombala kuyilo. Zingongezwa ukunika umthamo kwiimilo, iziphumo zokukhanya kunye nezithunzi.
1 Iintlobo eziphambili zegradient
1.1 igradient yomgca
1.2 Irediyadi yomthamo omninzi
1.3 Ezinye iintlobo zegradient
2 Uyenza njani i-gradient kwi-Illustrator inyathelo ngenyathelo
Iintlobo eziphambili zegradient
Njengoko sele sibonile, i-gradient yi ukuhlanganiswa kwemibala eyahlukeneyo kunye nemibala efanayo. Kodwa akukho lunye kuphela uhlobo lwe-gradient, kodwa kukho ezininzi. Kwisixhobo se-Adobe Illustrator segradient, sinikelwe ngeendlela ezahlukeneyo zokuyenza.
Ngolu khetho lomda wodidi, imibala idityaniswa ngokuqhubekayo. Ngayo unokwenza i-gradient ukusuka kwindawo yokuqala yobuso ukuya kwindawo yokugqibela kumgca othe ngqo.
Irediyadi yomthamo omninzi
Olu hlobo lothatho lungaphakathi imilo yesetyhula kunye nesiqalo sayo yindawo esembindini yokumilaKulapho imibala ivela khona.
Ezinye iintlobo zegradient
Imithamo emibini esele siyibonile, imigca kunye neradial, zezona zixhaphakileyo. Kodwa kukho ezinye iintlobo zegradient ezifana i-engile ye-engile, i-gradient ebonakalisiweyo, i-idayimani yedayimani, okanye i-freeform.
Ithambeka le i-engile, ivumela i-gradient apho imibala itshayelwe ngokunxamnye newotshi ukusuka kwindawo yokuqala. Enye yeemitha, kukuthambeka ibonakalisiwe, inokufakwa imibala ngeendlela zokuthambeka komgca kumacala omabini, rhoqo ukusuka kwindawo yokuqala. Kwaye ekugqibeleni, i-gradient ye i-rhombus, nguyena ovumela ukuba wenze i-gradient kwimilo yejometri ye-rhombus, ukusuka kwindawo yokuqala ephawulwe ngenye yee-vertices, ngaphandle.
Iigradient zigcinwa kumathala eencwadi, ukukhetha enye yazo kufuneka ucofe kwimenyu kwaye ukhethe ithala leencwadi emazantsi kuluhlu. Kukwakho nokuba nokwenzeka kogcino kunye nokulayisha amathala eencwadi athathiweyo esiwakhuphileyo, kule menyu.
Uyenza njani i-gradient kwi-Illustrator inyathelo ngenyathelo
Ukuba nekhono lokudlala ngamanqanaba ahlukeneyo ombala kubalulekile kwiingcali kwilizwe loyilo. Nje ukuba sizazi iindidi ezahlukeneyo zeegradient ezinokwenziwa, kufuneka siziqhelanise nesi sixhobo ukuze sifumane ezona ziphumo zibalaseleyo.
Los Amanyathelo ekufuneka siwalandele ukwenza i-gradient yombala kwi-Adobe Illustrator ngala alandelayo.
Inyathelo lokuqala liya kuba kukwenza uxwebhu olutsha. Ukuba kuguqulelo lwakho lwe-Adobe Illustrator awuboni isikrini sokuqala esikunika ithuba lokudala ifayile entsha, siya kwibar yesixhobo ephezulu kwaye sikhethe ifayile yefayile, kwaye ke ukhetho kwakhona, kwaye siya kulungelelanisa ubungakanani. yoxwebhu.
Siza kuya kwi-toolbar ye-pop-up, ebonakala ngokungagqibekanga kwicala lasekhohlo letafile yethu yomsebenzi, kwaye siya kukhetha isixhobo seemilo zejometri kwaye senze iimilo ezahlukeneyo, kule meko izikwere kwiseyile yethu.
Nje ukuba sibe nezikwere zethu, siya kudala iiswatshi zemibala emibini. Siza kuya kukhetho lwe-swatches kwaye sichaze imibala emibini esiyifunayo ngamnye kubo, kwimeko yethu umbala omthubi kunye nombala oluhlaza okwesibhakabhaka, imibala emibini enamandla kakhulu ukubona ukuba isiphumo se-gradient sisebenza njani. Emva koko siya kucofa kwiqhosha lokuvuma.
Enye yeengcebiso esikunika zona kukuba i-gradient yenziwa ngemibala ethambileyo ukunika ingqiqo yokuvisisana.
Ukuze usebenzise imibala kwiifom esizenzileyo, siya kuvula ithebhu yegradient kwaye sikhethe omnye wemibala ekhethiweyo kwaye siya kuyibeka ukuba igcwalise umbala. Inyathelo elilandelayo kukutsala isampulu ekhankanyiweyo kwenye yeziphatho ezivela kwifestile yodidi.
Siza kukhetha enye Amanani ethu, kwaye siya kusebenzisa i-gradient kuyo umgca kunye neyokuqala iisampulu zethu, kulo mzekelo igradient ukusuka eluhlaza okwesibhakabhaka ukuya kumhlophe. Ukutshintsha uhlobo lwegradient ukuya kwiradial, sinokubona ukuba iya kujongeka njani kumzobo wethu wesibini.
Singenza la manyathelo ngomnye umbala weswotshi esiwukhethileyo, sizama zombini iindidi zodidi. Akuyimfuneko ukuba umbala wesibini we-gradient yethu umhlophe, unokuba ngomnye umbala kwaye udibanise iisampulu ezimbini esizikhethileyo.
Inyathelo elongezelelweyo liya kuba, yongeza isithathu, isine okanye imibala oyifunayo kwibhokisi yombala eboniswe kwifestile yodidi, njengoko sibona kulo mfanekiso ulandelayo.
Ukongeza ii-shades ezininzi, nje beka ikhesa phantsi kwebhokisi apho iithowuni ziboniswa kunye no + icon iya kuvela, kwaye ukucofa kuya kuzisa umphathi omtsha.
Kubalulekile xa usenza ukwakheka okubonakalayo, yenza isiphumo esihle se-gradient, kuba ngale nto, unokubamba ingqalelo yababukeli.
Ngoko ke, eyona nto iphambili khetha imibala ngobulumko, ngoko ke kuyathakazelisa ukwazi ivili lombala kunye nokuhlanganiswa kombala ongcono kakhulu, ekubeni akuyiyo yonke imibala esebenzayo xa udala i-gradients, kungekhona yonke into eyenza impembelelo enhle.
Imibala esetyenziswayo kufuneka ibe idityaniswe kakuhle, ukwenzela ukuba isiphumo sibe lula kwaye sivisisane. Kukho iimeko, apho i-gradients inamandla kakhulu, idibanisa imibala enqabileyo kakhulu, ngenjongo yodwa yokutsala ingqalelo yoluntu. Ezi ntlobo ze-gradients aziqhelekanga kakhulu, oko kukuthi, ziimeko ezikhethekileyo.
Iigradient zinokukhapha umfanekiso okanye isicatshulwa, ngoko ke kubalulekile ukuba ezi elementi zingalahleka kuyilo xa kusetyenziswa igradient., yiyo loo nto sikuxelela ukuba imida kufuneka igudiswe.
Ngezi ngcebiso, sinethemba lokuba uya kukhuthazwa ukuba wenze ukuqamba usebenzisa isixhobo segradient kwaye utsale abaphulaphuli bakho ngomxube wombala owahlukileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Indlela yokwenza i-gradient yemibala
yintoni i-cynicism ekhanyisiweyo